Akụkọ Bible: Eze Ọjọọ Amalite Ịchị Ijipt - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
NDỊ ikom a na-amanye ndị a ịrụ ọrụ. Lee nwoke a nke na-apịa otu n’ime ndị ọrụ a ụtarị! Ndị ọrụ ahụ bụ ndị ezinụlọ Jekọb, bụ́ ndị a na-akpọ ụmụ Izrel. Ndị ikom ahụ, bụ́ ndị na-amanye ha ịrụ ọrụ, bụ ndị Ijipt. Ụmụ Izrel aghọwo ndị ohu ndị Ijipt. Olee otú nke a si mee?
Ruo ọtụtụ afọ, ezinụlọ buru ibu nke Jekọb biri n’udo n’Ijipt. Josef onye bụ́ nwoke kasị mkpa n’Ijipt ma a gụpụ eze Fero, lekọtara ha anya. Ka e mesịrị, Josef nwụrụ. Fero ọhụrụ nke na-ahụghị ụmụ Izrel n’anya wee bụrụ eze Ijipt.
Fero ọjọọ a mere ka ụmụ Izrel bụrụ ndị ohu. O nyere ndị ikom dị obi ọjọọ ma bụrụ ndị arụrụala ọrụ nke ilekọta ha. Ha manyere ụmụ Izrel ịrụsi ọrụ ike n’iwuru Fero ọtụtụ obodo. Ma ụmụ Izrel nọgidere na-amụba n’ọnụ ọgụgụ. Mgbe nwa oge gasịrị, ndị Ijipt tụrụ egwu na ụmụ Izrel ga-adị ọtụtụ dịkwa ike karịa ha.
Ị̀ ma ihe Fero mere? Ọ gwara ndị inyom na-enyere ụmụ nwaanyị Izrel dị ime aka ịmụ nwa, sị: ‘Unu ga na-egbu nwa nwoke ọ bụla a mụrụ.’ Ma ndị inyom ahụ bụ ndị ezigbo mmadụ, ha egbughị ụmụ ọhụrụ ndị ahụ.
N’ihi ya, Fero nyere ndị ya niile iwu a, sị: ‘Na-egbunụ ụmụ nwoke nke ndị Izrel. Hapụnụ naanị ụmụ nwaanyị.’ Nke ahụ, ọ́ bụghị ihe dị egwu inye iwu ka e mee? Ka anyị hụ ụzọ e si zọpụta otu nwa nwoke a mụrụ ọhụrụ.
Na foto a, ònye bụ nwoke a ji ụtarị, ònyekwa ka ọ na-apịa ya?
Mgbe Josef nwụsịrị, gịnị mere ụmụ Izrel?
N’ihi gịnị ka ndị Ijipt ji malite ịtụ ụmụ Izrel egwu?
Olee iwu Fero nyere ụmụ nwaanyị na-enyere ndị inyom Izrel dị ime aka ịmụ nwa?
Gụọ Ọpụpụ 1:6-22.
Olee ụzọ Jehova si malite imezu nkwa o kwere Ebreham? (Ọpụ. 1:7; Jen. 12:2; Ọrụ 7:17)
Olee otú ndị inyom Hibru na-enyere ndị dị ime aka ịmụ nwa si gosi nkwanye ùgwù maka ịdị nsọ nke ndụ? (Ọpụ. 1:17; Jen. 9:6)
Olee otú e si kwụghachi ndị inyom ahụ na-ele ime ụgwọ maka ikwesị ntụkwasị obi n’ebe Jehova nọ? (Ọpụ. 1:20, 21; Ilu 19:17)
Olee otú Setan si nwaa imebi nzube Jehova banyere Mkpụrụ Ebreham e kwere ná nkwa? (Ọpụ. 1:22; Mat. 2:16)